कलियुगका कुरा: September 2012
सरकारी अस्पतालको ट्वाइलेट सफा गर्ने संस्था छैन कुनै?
हैन, सरकारले गरेको कामले मात्र जनताको फलिफाप भएन भनेर नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने भन्दै यत्रा एनजिओ आइएनजीओ ले काम गरिरहेका छन् नेपालमा। सरकारले त सकेन सकने सरकारी अस्पतालको ट्वाइलेट सफा गर्ने कोही एनजिओ आइएनजीओ छैन भन्या यो देशमा ?
वीर अस्पताल भित्रको एउटा शौचालय बाहिरबाट हेर्दा यती राम्रो देखेर भित्र छिरेको। राम राम! सात वर्षदेखि पिनासबाट थलिएकाले पनि थाहा पाउने गन्धले धन्नै 'फेन्ट' भइएन।
सरकारी अस्पतालका शौचालय सफा राख्ने मात्र कुनै संस्था भए वर्षको पाँच हजार रुपैयाँ मै पनि दान गर्थे‌ सक्दासम्म त बरु। किन सरकारी अस्पतालका शौचालय त्यति विघ्न फोहर हुन् भन्या ?
दुई थरी विश्लेषकलाई सुन्न नपरे हुन्थ्यो
प्रभु दुई किसिमका विश्लेषकहरुको कुरा सुन्नबाट मलाई बचाइदेउ,
1) विश्वमा अन्यत्र यस्तो कतै हुनै सक्दैन/भएकै छैन भनेर संसारकै ठेक्का लिनेहरुबाट।
2) यो निर्वीकल्प हो अरु विकल्पै छैन भन्नेहरुबाट।
(निर्वीकल्प भन्ने पञ्चायती व्यवस्था त ढल्दो रहेछ। संसारमा निर्वीकल्प भन्ने एक दुई कुरा मात्र होलान्। श्वास प्रश्वास नफेरी बाँच्न सकिदैंन, परिवर्तन भन्ने कुरा निर्वीकल्प हो)
'सुन्न नसक्ने' भनेर किन थपेको ?
समाचारको शिर्षकमा बहिरा मात्र नभनेर किन सुन्न नसक्ने थप्न परेको होला?
यो समाचार लेख्ने, सम्पादन गर्नेलाई सुन्न सक्ने पनि बहिरा हुन्छन् भन्ने लाग्छ कि ? बनेपास्थित बहिरा स्कूलको सूचना पाटीमा टाँसेर राखेको एउटा समाचार।
'खलनायक' नै भनी श्रद्धान्जली
कसैको मृत्युमा 'खलनायक' नै भनी श्रद्धान्जली व्यक्त गरेको विज्ञापन पहिलोपटक पत्रिकामा देखियो, सायद फिल्मको खलनायक थिए होलान् यिनी।
अफिस टाइम जस्तोमा खुल्ने ATM
ATM भनेको Automated Teller Machine भए पनि म जस्तो अबुझहरुले Anytime Money भनेर बुझिन्छ। तर हाम्रो देशमा यो एउटा बैंक रहेछ ATM मा पनि निश्चित समयमा मात्र पैसो झिक्न पाइने। त्यो पनि बिहान ८ बजेदेखि ९.३० सम्म अनि साँझ ४ बजेदेखि ५.३० सम्म। अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमा देखेको एउटा मात्र ATM मेसिन बाहिरको सूचना।
झ्याम्म लाग्ने दर
भदौ २४ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको एक विज्ञापन, वाइन खाऔं तीज मनाऔं
श्रीमान्: दर कस्तो थियो?
श्रीमती: खोई गिलासमा राखेका थिए। 2/3 गिलास पिइदिएको, एकछिनमा झ्याम्म पार्नेरहेछ। त्यसपछि एकछिन जोसले नाचियो।
तीजका अवसरमा भन्दै तीज आउन भन्दा महिना दिन अगाडि देखि नै दर खाने/खुवाउने चलन बढ्दो छ। तर दाजुभाइ, आमाबुबा, माइतीले दिदी बहिनी वा छोरी चेलीलाई बोलाएर घरमा होइन । व्यापारिक संघसंस्थाले पैसा लिएर दरको टिकट बेच्छन्। टिकट किन्नुस र दर खानुस्।
अमेरिकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) लाई आतंककारीको सूचीबाट हटाएको भनेर सूचना जारी गरेछ। यसले त मात्रिका यादवको पार्टी पो आतंककारी सुचीबाट हट्यो। प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी त एनेकपा (माओवादी) हो। हुन त आतंककारी सूचीबाट हटाउन खोजेको प्रचण्ड नेतृत्वकै माओवादीलाई होला। तर, अमेरिकी सरकार पनि म जस्तै पंगु नै रहेछ, खास नाम पनि थाहा नपाएको।
'अतिथि' भनेर बोलाएर 'अथिती' बनाइदियो भने
कसैकसैको अतिथि भनेर लगाइएका सबैजसो ब्याच संकलन गर्ने बानी हुन्छ। त्यस्तै एकजना भेटिए अछाम ठूलासेनमा। तर उनलाई लगाइएका ब्याचमा भाषिक बलात्कार भने चर्कै रहेछ। 'अतिथि'को अर्थ त थाहा छ, एक त तिथि मिति नदिइकन आउने पाहुना। त्यो भन्दा पनि उच्चस्तरमा भन्न पर्दा, कुनै कार्यक्रममा विशेष रुपमा आमन्त्रण गरेका व्यक्ति।
तर कसैले तपाईलाई 'अतिथि' भनेर बोलाएर 'अथिती' बनाइदियो भने के गर्ने। अथिती मतलब - थिती नभएको मान्छे।
भाषिक बलात्कार गर्ने चाहिँ फेरि पत्रकारकै स‌ंस्थारहेछ - प्रेस चौतारी।